Torohevitra lehibe amin'ny famitana ny fivezivezena mankany amin'ny orinasan-Internet ... | Fifamoivoizana hiara-miasa
Torohevitra lehibe amin'ny tanjona Traffic Ho an'ny orinasanao Internet
Raha tsy misy dokambarotra ny entanao na ny programa Affiliate dia azo antoka fa tsy ho fantatra sy tsy ho ekena koa ny fikambanananao, amin'ny teny hafa, maty ny mpanjifanao!
Mihabetsaka ny isan'ny olona misoratra anarana miaraka amin'ny laharam-pahamehan'ny Affiliate Marketing izany hoe, Olona manao dokambarotra momba ny entana, na ny anao manokana na ny olon-kafa amin'ny fanantenana ny hanao fivarotana na onitra!
Ho an'ity karazan'orinasa ity dia mila mampiroborobo ny mpivarotra Affiliate mitovy ianao ary koa ny faritra tsara indrindra ho an'ireo dia ny fifanakalozana fifamoivoizana, ny lisitra azo antoka, ny mailaka virosy, sns.
Ny ankamaroan'ny mpivarotra Affiliate dia manandrana mino ihany koa ivelan'ny boaty ary misy koa ireo namoaka ny fikarohana azy ireo ary napetraka miaraka amin'ireo lisitra be dia be amin'ny Programme Advertising. Iray amin'izany lisitra izany ny.
Ny zavatra asehonay amin'izany dia ny olona manana zavatra toa ny Shops, tranokala fitobiana izay Jeweler karazana orinasa toy izany.
Manao Website izany dia User-friendly ary mora koa.
Tsara izany, noho izany dia irinao ny hitaona ireo mpitsidika ny tranokalanao miaraka amin'ny sary an-tsary ary koa ny fanangonana sary mihetsika amin'ny solosaina amin'ny Internet. Tsy handany fotoana fotsiny akory ny taonina, fa ny hala kosa dia hahita fa sarotra ny mijery amin'ny tranokala. Raha misoratra anarana amin'ny iray amin'izy ireo ianao ary manomboka amin'ny tetik'asa doka nataonao dia azo antoka fa ho afaka hitondra mpividy ho avy bebe kokoa aza.
To lasibatra tranonkala Internet Malagasy mety ho somary miasa mafy ny fifamoivoizana ho anao raha jerena amin'ny voalohany. Raha fantatrao izay hatao ary koa hoe aiza no hanombohana, dia azo antoka fa tsy hisy korontana mihitsy. Ataovy ao an-tsaina ireo sosokevitra ireo ho an'ny fikambanana Internet mahomby kokoa!
Raha tsy misy dokambarotra ny entanao na ny programa Affiliate dia azo antoka fa tsy ho fantatra ny fikambanana misy anao ary tsy hisy fanekena, amin'ny teny hafa, maty ny mpitsidika ny orinasanao! Mpivarotra Affiliate marobe no manandrana mieritreritra any ivelan'ny boaty ary misy ihany koa ireo namoaka ny fikarohana azy ireo ary napetraka miaraka amin'ireo lisitra be dia be amin'ny Programme Advertising. Tsara izany, noho izany dia maniry ny hisarika ireo mpitsidika ny tranokalanao amin'ny sary an-tsary ianao ary koa fanangonana sary mihetsika solosaina amin'ny Internet. Raha misoratra anarana amin'ny iray amin'izy ireo ianao ary manomboka amin'ny tetikasanao amin'ny doka, dia tsy isalasalana fa ho afaka hanintona mpanjifa betsaka kokoa aza ianao.
Ny mikendry ny fivezivezena amin'ny tranokala dia mety ho somary miasa mafy ho anao amin'ny voalohany.